Iwe une mazita akawanda emahofisi ekunyora mazita evro vasina kumbobvira vatenga chinhu here? Munguva ichangopfuura, ndakanga ndichitaura nevamwe vashoma vehama dzangu dzeblogger evro vatsva mumutambo wekugadzira mabhuku uye vakandibvunza kuti ndeipi ma email ambandishandisa kana mumwe munhu achinyora tsamba yangu Yekun.
Mukuwedzera, iwe watova nehumwe ruzivo rwakasiyana nezvevaya vanogona kutengesa. Iwe unogona kunge wakaunganidza mazita evro, email, nzvimbo uye pamwe zuva rekuberekwa kana yegore, semuenzaniso. Kana iwe ukashandisa tsamba yekutsvaga sarudzo inofanana MailChimp, iwe unogonawo kuona Angaswera ivo vari kuzarura uye iyo inoshamwaridzana mukati mavo vari kutarisa. Kurse kuWP Kube inovhara 11 plugins juungashandisa kuunganidza maimeri pane site WordPress uye ndinofunga kuti kuverenga kwakanaka kune խուսափ vanofarira. Ruzivo rwese urwu runogona kuongororwa uye kushandiswa kune mukana wako kushambadzira.
Zvisinei isu hatisi kutaura pamusoro pemashandisi kana mabheji kuti atungamirire mimwe mitungamiri nhasi. Panzvimbo pezvo tiri kutarisa pamudzi wepi neipi yemushandirapamwe ne email – ma email.
1 Mhando dze Tsamba dzekutumira kuMailing Lista Vanyoresa
2 Email-e në Nyaya
Mhando dze Tsamba dzekutumira kuMailing Lista Vanyoresa
Për më tepër, pasi që ju lutemi kërkoni nga faqja e internetit e faqes XYZ ju jeni duke kërkuar që të gjeni më shumë se 15% kubva chero ipi zvayo kutenga panel. Pa arka, shandisa kero chete chete: XYZ
Wakave nemukana wekutarisisa mutsara wedu mutsva we [kuzadza chibereko]. Tinoda vose voresyoresa uye vasingatendi uye vanoda kukupa pachena kutumira pamutengo wako unotevera. Ingoshandisa purogiramu chete: XYZ
Gëzuar ditëlindjen nga XYZ.com! Tinovimba une zuva rekuzvarwa rinofadza. Kuti tikubatsire kupemberera, tiri kukupa iwe yemahara [zadza zvisina chinhu] nechero rekuwedzera pamwe nekutakura kwemahara.
Email-e në Nyaya
Statistikat e Tregtimit të Email-ve në SilverPop, në kërkim, Email, Statistikat e Tregtimit të Email-ve, në Mbretërinë e Bashkuar 52% yevatengi chinyoresa kune tsamba unutumira vachitarisira kugamuchira purogiramu yekubvisa kana kupikisa.
Apa ndipo panowanikwa maikeri diteme. Nenguva iyo mutengi anonyora tsamba yako yekunyora, anofanira kutanga kutora mutsamba emaimeri kubva kwauri. Iko email yakagamuchirwa inopupurira kuti iye zvechokwadi akanyoresa mazita ako emahofisi. Iwe unogona kunge uchida kutevera nekutengesa kunopa kubhadhara pachena kana mari iri kure.
Mukuwedzera kune maisonail, unogona kutumira zvikwata zvakakosha kana uine kutengesa, zororo rezororo uye zuva rekuberekwa uye chiitiko chekuyeuka zvakanyanya kune խուսափ vatengi vane zuva rekuberekwa kana remhemberero mumwedziaku.
Pemusoro peemail aya, iwe unofanirwa kutumira email njëuyeuchidza nguva nenguva. Semuenzaniso, kana iwe wakapa mutengo wekusaina uye nguva yekupera yava kusvika, yako autoresponder inofanira kutumira email email iyo yakakonzeresa kana munhu wacho asina kushandisa kodhi yake yekutaura.
Kana zvasvika pakubudirira kwemashoko emakambani ekutengesa, pane mabhizinesi akawanda anoita izvi zvakanaka chaizvo. Kudzidza maitiro խուսափ kunogona kukubatsira kuti uuye neemaepi ako kuti utumire kune vanyori vako.
Ekonsultancy akatarisa LV = Yekutumira tsamba uye zvavari kuita chaizvo. LV = ikambani yeinishuwarenzi. Zvinangwa zvavo zvaive zvekuvandudza vatengi rapport uye kuwedzera vatengi vatsva vanotenga inishuwarenzi online. Maemail aya airatidzirwa maererano nerudzi rweinishuwarenzi rwainyoreswa rwaida kutenga uye pavaive vari kuda kwavo kutenga inishuwarenzi.
Zvimwe zvezvinhu LV = zvakaitwa ndezvekuita kuti email linjën mazita, tsanangudzo pamusoro pemutemo Iyo mutengi aitarisa Member achipa nzira dzekutengesa kutengesa, zvakadai sekufambisa inshuwarisi, Kumba yveshuwarisi Member kunyange inshuwarisi yepanyama pamwe nehutengo hwakapikirwa kana mutengi yakanamatira pachibvumirano.
Canopy Labs vakatarisa chitoro chemafashoni, chavasina mazita chaiwo. Chitoro chemafashoni chakawedzera kuwedzera kupfuura 5 nguva mune shanduko mushur mekushandisa email chikamu.
Marketing Sherpa akatarisa maeamerica akasiyana-siyana akatumirwa na Smartpak Equine izvo zvinoguma nekutengesa kwepamusoro. Iko kambani inotumira dzimwe ma email email zvakananga ane zviitiko zvinoshamisa. Vanenge vakakomba 40 emaimeri akasiyana-siyana atinotumira panguva dzakasiyana-siyana.
Somuenzaniso, vanotumira mavhitamini nevatengi mapepa kune vatengi vane mabhiza. Panenge mazuva 11 vasat vatengesa SmartPak kutumirwa, mutengi anotumirwa chiyeuchidzo. Izvi zvinoita kuti mutengi azive apo SmartPak ichasvika ndokumupa iye mazuva mashomanana kuti aite chero shanduko kana kuwedzerwa kune chirongwa.